Daawo Akhri raggii isku qarxiyay Ex Kontorol Afgooye magacyadooda qabiiladooda iyo baabuurkii ay isticmaaleen weerarkii dhimashadda sanadka
Thursday January 02, 2020 - 08:24:17 in Wararka by Super Admin
Xog muhiima oo baaris dhaba ku saleeysan. Baabuurkii Dheeynadda ee isku qarxiyay Ex Kontorool Afgooye waxaa lahaay Shirkadda Hormuud Telecom, waxaa la socday Nin ka mida shaqaalaha Shirkadda, Ninkii waday ee isqarxiyay ,Askari ka tirsan ilaaladda Ta
Xog muhiima oo baaris dhaba ku saleeysan. Baabuurkii Dheeynadda ee isku qarxiyay Ex Kontorool Afgooye waxaa lahaay Shirkadda Hormuud Telecom, waxaa la socday Nin ka mida shaqaalaha Shirkadda, Ninkii waday ee isqarxiyay ,Askari ka tirsan ilaaladda Taliyaha boliiska degmadda Afgooye Cabduqadir Nuunow iyo Laba Askari oo Raxanweyn u dhashay isagana uu raaciyay baabuurkaas.
Askarta la socotay ee soo dhaafiyay kontooraladda kuna dhintay qaraxa waxey kala yihiin:
1- Dable Adan Cilmi Cali, oo qabiilkiisu yahay Waanjel.
2- Dable Adan Cali Isaaq, oo qabiilkiisu yahay Jiroon.
3- Dable Xasan Dabatoow, oo qabiilkiisu yahay Dabare.
Askarta la socotay , ninkii shaqaalaha Hormuud Telecom iyo Ninkii waday kuligood waa ku dhinteen.
NInka Hormuud Telecom u shaqeeya iyo Askarta Afgooye laga saaray ayaa soo gudbiyay Baabuurka oo soo dhaafiyay kontorooladda oo dhan.
Taliyaha degmadda Afgooye Cabduqadir Nuunow wuxuu wacay Khaliif Kaahiye, taliyaha Shabeeladda hoose , taliyahaasna waxaa laga soo xigtay inuu yiri "Amarka Taliyaha Ciidanka Boliiska Jeneral Xijaar ayaan ku sii daayay baabuurka iyo askarta la socotay"
Baabuurka oo Hormuud telecom isticmaali jiray hal todobaad wuxuu horyaalay Saldhiga degmadda Boliiska Afgooye,waxaana habeenkii loo kaxeeyay Xaafadda Doolaawe ee dhanka Waqooyi Galbeed Afgooye.
Al-Shabaab lagama guuleeysan doono, shacabkuna tacsi kama bixi doonaan haddii aan Hormuud telecom lagu qasbin iney telefoonadooda iyo adeegga EVC Plus diiwaangeliyaan.
Inta Al-Shabaab Canshuurta baadda ku qaadayaan Akoonadda Salaam Bank iyo EVC Plus, inta argagixisadu telefoonadda ay qaraxyadda u adeegsanayaan yihiin kuwa Hormuud Telecom, inta ay dhageysanayaan qofkasta oo Hormuud wato, inta ay maamulayaan System-ka Hormuud Telecom ,waa adkaan doontaa in laga adkaado Al-Shabaab.
Dowladda ka jirta Koofurta Somalia waa Hormuud Telecom. inta badan Saraakiisha, Gudoomiyeyaasha Maxkamadaha iyo Wasiiraduna waxaa Saami laga siiyay Shirkadda Hormuud . bil walbana lacag gunno ah ayaa la siiyaa.
Ma jirto Dowlad la xisaabtami karta Hormuud Telecom, dalkana iyagaa maamusha . shaqaalaha iyo maamulkana %90 waa argagixisadda Al-Shabaab.
Daacish iyo Shabaab lacagta ay sanadkii siiyaan ee loogu magacdaray Canshuur iyo Zakaawaat ayaa dhisi karta dalkeena oo dhan.
Sikastaba ha ahaatee,waxaa loo baahan yahay kacdoon dadweyne in lagala hortago Shirkadaha maalgeliya argagixisadda ee Tujaarul Xarbiga iyo Madaxda Dowladda ee laaluushka ay siiyaan.
Ninka qaraxa ku dhintay ee Hormuud Telecom u shaqeeynaayay oo Gudoomiyaha Alburuuj Feysal Diini soddog u yahay waxey ilma adeer yihiin Axmed Nur Cali Jimcale,waxaana la yiraa Liiban Saciid Jimcale Kulmiye.